Gamithromycin Certification - Shiinaha NCPCVET
Recently, NCPCVET guuleystay shahaado daroogada cusub ee fasalka labaad ee drugs- qaranka cusub xoolaha "Gamithromycin" iyo "duray Gamithromycin."
Gamithromycin waa antibiotic a sheeko macrolide semi-dardaro. Waqtigan xaadirka ah, tylosin iyo tilmicosin hubkaas ayaa loo isticmaalaa sida macrolides. daroogada waxaa loo isticmaalaa si looga hortago ama lagu daaweeyo cudurrada neef ee lo'da iyo doofaarro. Waxay sida caadiga ah ku quudin jiray dhir udgoon ama biyaha la cabbo. saamaynta ka hortagga ama daaweynta u baahan tahay maalmood kala duwan ee maamulka soo noqnoqda. Inkasta oo ay gaartay natiijo fiican, laakiin la kordhiyo isticmaalka waqtiga, waxaa jiray degrees adkeysiga daawada kala duwan oo meelo badan, iyadoo kororka xaddiga daaweynta waxaa si tartiib ah hoos u.
duray of gamithromycin horumariyo by NCPCVET waa diyaarinta a ku khalda, prefiltering, sifeynta oo Nadiif ah, iyo buuxinta aseptic sameeyey. Waxaa leeyahay faa'iidooyinka soo socda: First, dhoos keli ah duray muruqa / muruqyada dhexdooda duro subcutaneous, duro hal xal u heli karo dhibaatada. labaad waxaa kaliya ma loo isticmaalo si looga hortago in xoolaha cudurrada neef mareenka, laakiin sidoo kale saamaynta dhabta ah ee cudurrada neef-doofaarka. Midda saddexaad waa awood saamayn muddo dheer, waxyeelo ma laha, oggolyahay waa ka itaal badan tylosin, tilmicosin iyo daroogooyinka kale macrolide loo. Midda afraad waa faa'iidooyinka spectrum ballaaran bakteeriyada, waxqabadka bakteeriyada dila xoog leh, nuugista degdeg ah, bioavailability sare, intii hadhayna ku yar yahay, ammaanka iyo oolnimada sare.
Codsiga waxaa guul soo saarka caawin doono tayadoodii dhismeedka warshadaha ee wax soo saarka xoolaha Shiinaha ee daroogada, dheeraad ah la kulmaan baahida suuqa, iyo kor loogu qaado tartanka suuqa daroogada duulaan xoolaha ah.
waqti Post: Jun-26-2018